New Skiin Lotion ရဲ့ Year End Promotion ပြောင်းလဲခြင်း ? အဝုန်းစိန် ချောချောချေတို့ရဲ့ လက်စွမ်းတွေကြောင့် Garnier Essence လေး Stock ပြတ်သွားပါပြီ ? Promotion Stock ပြတ်သွားတာကြောင့် ချောချောချေတို့ အဆင်မပြေဖြစ်သွားခဲ့ရင် အနူးညွှန့်တောင်းပန်ပါတယ် ? New Skiin Lotion Promotion ရဲ့ Garnier Essence အစား ??? ????? ?????? (???) ၅ ထုပ် ကို ပြောင်းလဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ? New Skiin Whitening Tone Up Body Lotion တစ်ခါတည်း (၅) ဘူး ဝယ်ယူသူတိုင်း New Skiin Lotion (20g) ၁၀ ထုပ် ထပ်မံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
FOCUS Beauty Agent များအနေဖြင့် ? #လူလိမ်များ ? သတိထားစေရန် အသိပေးခြင်း ? FOCUS Beauty တာဝန်ရှိသူများနှင့် Agent များ၏ နာမည်များကို အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ကာ ငွေကြေးလိမ်လည်မှုများ ရှိနေပါသည်။ ? တစ်စုံတစ်ဦးမှ Agent များအား FOCUS Beauty တာဝန်ရှိသူများနှင့် Agent များ၏ နာမည်များကို အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ကာ ငွေကြေးလာရောက် အလှူခံခြင်း၊ ငွေကြေးချေးခြင်း၊ ငွေကြေးခဏလှည့်ခြင်းများ ဆက်သွယ်လာပါက ဖုန်းနံပါတ်ကို သေချာ စီစစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများကို မေးမြန်းပြီး မှန်ကန်မှု ရှိမရှိ သေချာ စစ်ဆေးစေချင်ပါသည်။ ? သို့ဖြစ်ပါ၍ ငွေကြေးလိမ်လည်မှုများ မခံရစေရန် FOCUS Beauty Agent များအနေဖြင့် လူလိမ်များ သတိထားသင့်ပါကြောင်း အသိပေးပြောကြားလိုက်ပါသည်။
????? ?????? မှ ထုတ်လုပ်တင်သွင်းနေသော အောက်ပါ ကုန်ပစ္စည်းများအားလုံးသည် မြန်မာနိုင်ငံ FDA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရရှိထားပြီးဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ??? ????? ?????? ၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ရောင်းစျေးအောက်လျော့၍ ရောင်းချပါက ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေပြဌာန်းထားသည့်အတိုင်း အရေးယူခြင်းခံရမည်။ ??? 1. Snail Wish Whitening Cream (50 g) တစ်ဘူး - 31,000 Kyats (FDA No. MN201234482) 2. New Skiin Foam Cleanser (150 g) တစ်ဘူး - 10,000 Kyats (FDA No. MN200630407, MN200630408, MN200630409) 3. New Skiin Brightening Exfoliation Toner (150 ml) တစ်ဘူး - 19,000 Kyats (FDA No. MNA2107000318) 4. New Skiin Aqua Luminous Sleeping Cream (100 g) တစ်ဘူး - 20,500 Kyats (FDA No. MN201234582) 5. 24/7 Tooth Balance (180 g) တစ်ဘူး - 7,500 Kyats (FDA No. MN200730718) 6. New Skiin All In One Tone Up Cream (5 g) တစ်ထုပ် - 3,500 Kyats (FDA No. MN191023848) 7. New Skiin Whitening Selfie Face Mask (၅ချပ်ပါ တစ်ဘူး) - 15,000 Kyats (FDA No. MN191023849) 8. New Skiin Skin Reborn Solution (အလုံး၃၀ပါ တစ်ဘူး) - 20,000 Kyats (FDA No. IR-F/2020-B1/069) 9. New Skiin Whitening Tone Up Body Lotion (300 ml) တစ်ဘူး - 22,000 Kyats (FDA No. MN201234583) 10. Better Skin Coffee Soap Scrub (120 g) တစ်တုံး - 4,500 Kyats (FDA No. MN200428693) 11. Beaute Cafe Arabica Coffee 37 in 1 (အထုတ်သေး(၁၀)ထုတ်ပါ အထုတ်ကြီး(၁)ထုတ်) - 15,000 Kyats (FDA No. IR-F/2020-B1/1716) 12. Ketchup Bubble Makeup Remover Tissue (30 Sheets) တစ်ထုတ် - 5,000 Kyats (FDA No. MN200529979) 13. Ketchup Bubble Makeup Remover Tissue (100 Sheets) တစ်ထုတ် - 12,000 Kyats (FDA No. MN200529979) 14. Ketchup Matte Liquid Lipstick (3 ml) တစ်ချောင်း - 8,500 Kyats (FDA No. MN200529980, MN200529981, MN200529982, MN200529983, MN200529984) 15. Nano Brush တစ်ခု - 12,000 Kyats 16. Nano Spray တစ်ခု - 17,000 Kyats
⭐️? Happy New Year 2022 ?⭐️ 2022 နှစ်သစ်မှာ ရည်မှန်းချက်တွေ ပြည့်ဝပါစေ။ ချစ်ခင်ရသူများနဲ့ အတူ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေကြောင်း FOCUS Beauty မိသားစုမှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။
? ????? ?????? ???? ??? ????????? (??????? ?? ???????? ????) ? FOCUS Beauty ရဲ့ ? ????????? ကို မျှော်နေကြမယ်မှန်းသိလို့ ???? ??? မှာ အရမ်းတန်တဲ့ ????????? ပေးလိုက်ပြီနော် ?3?????? ???? အတွက် Target ဖြည့်ပြီး ✈️ ခရီးစဉ်လက်မှတ်တွေပဲယူမလား ? ???? ??? အတွက် Target ဖြည့်ပြီး ရွှေတွေပဲယူမလား ? များများလဲမြတ်မယ့် Year End Promotion ကာလက January (1) ရက်နေ့မှ စပြီး February (28) ရက်နေ့ အထိ (၂) လ ပြုလုပ်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အချိန် (၂) လတောင်ဖြစ်လို့ လုံးဝ လက်လွှတ်မခံသင့်ဘူးနော် ? Snail Wish Whitening Cream တစ်ခါတည်း ဘူး (၂၀) ဝယ်ယူသူတိုင်း ပုံမှန် FOC New Skiin All In One Tone Up Cream (၁၀) ထုပ်အပြင် Ketchup Bubble Makeup Remover Tissue 100 Sheets (၁) ထုပ် ထပ်မံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ? New Skiin All In One Tone Up Cream တစ်ခါတည်း အထုပ် (၂၀၀) ဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက် ပုံမှန် လက်ဆောင် (၁၀) ထုပ်အပြင် Kerchup Bubble Makeup Remover Tissue 100 Sheets (၁) ထုပ် ထပ်မံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ? Ketchup Matte Liquid Lipstick တစ်ခါတည်း (၅) ချောင်း ဝယ်ယူသူတိုင်း Ketchup Bubble Makeup Remover Tissue 30 Sheets (၁) ထုပ် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Ketchup Matte Liquid Lipstick တစ်ခါတည်း (၅) ချောင်း ဝယ်ယူသူတိုင်း FOC Ketchup Matte Liquid Lipstick (၁) ချောင်း ထပ်မံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၁၀ ချောင်း ဝယ်ယူပါက FOC ၂ ချောင်း) ? New Skiin Whitening Tone Up Body Lotion တစ်ခါတည်း (၅) ဘူး ဝယ်ယူသူတိုင်း Garnier Essence (၁) ဘူး နှင့် New Skiin Lotion (20g) ၅ ထုပ် ထပ်မံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
?? Merry Christmas ?? အေးချမ်းလှပတဲ့ ခရစ္စမတ်နေ့လေးမှာ ချစ်သောမိသားစုနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေ ခံစားရပါစေလို့ FOCUS Beauty မိသားစုမှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။
FOCUS Beauty ရဲ့ ? ?????? ???? တွေ ???????? မှာ ပြန်စပါပြီ ? ကဲ ဘယ်သူတွေက ခရီးစဉ်မှာပါမလဲ ???? ???? တွေ ဘယ်လောက်ပြန်ရမလဲဆိုတာ ရင်ခုန်စွာ စောင့်မျှော်နေပါမယ်နော် ? Beaute Cafe Coffee ဒီလ December 2021 မှာတော့3Months Trip ပိတ်မှာနော် ? December 2021 မှ February 2022 အထိ3Months Trip လေးတွေကတော့ Snail Wish New Skiin Cream New Skiin Supplement New Skiin Facial New Skiin Sleeping Cream New Skiin Lotion New Skiin Toner 24/7 Tooth Balance Better Skin Soap Ketchup Lipstick Ketchup Remover December 2021 မှ May 2022 အထိ6Months Trip ကတော့ New Skiin Mask September 2021 မှ February 2022 အထိ6Months Trip ကတော့ Nano Brush Nano Spray